About Us - Qingliu wobugcisa Co., Ltd.
Phone: + 86-0539-8372931 (Department Marketing)
Ezimbizeni & batyale
Ukugcinwa & Organizaion
Linshu Yimeng Qingliu wobugcisa Co., Ltd kuveza e Linyi mzi, apho idume ngokuba le hometwon of eziethe emhlophe. Njengoko lokuvelisa elikhulu-wokulinganisa, siya kubonelela iintlobo ezahlukeneyo izinto willow kunye kuyilo ubuncwane nomgangatho obalaseleyo.
Yasekwa ngo-2001 ngonyaka elishumi olubonileyo olo luphuhliso olukhawulezayo mveliso lwethu. Uhlala 20000 square metres lizwe, sisebenzisa abasebenzi malunga 500 umyili bethu bokuqala, bonke bephela spealized xa interweaving ukuba imbali elide, imisebenzi yabo ndizuze udumo enkulu ukusuka ekhaya nakumazwe aphesheya.
Ngenxa elithumela wobungcali, siye namava ngokwaneleyo ekuthumeleni willow yezandla, ukuba namhlanje, siye sakha ubudlelwane ishishini kunye kumazwe amaninzi ehlabathini, ingakumbi eYurophu, eMntla Melika njalo njalo, waza wafumana ikhredithi elihle kubathengi bethu.
Umgangatho wenkonzo umxhasi na siseko wethu.
Production kuya kulungiselelwa ngokungqinelana kumfanekiso wakho, inkcazo okanye isampuli yakho. Emva kokuba zisinika isiqwenga sephepha yoyilo, a ezibonakala zinqweneleka ilizwe eZulwini sinako ukwakha kuwe.
ebuza yakho naliphi ixesha noku.
Hancun, Linshu Yelizwe, Linyi City, Shandong kwiPhondo, China
RIGHT AT HOME: Holiday Decor linikeza sweet ...